PSJTV | अब कविता लेख्नुस कमरेड ओली !
प्रचण्ड जस्ता सहचालक हुन्जेल ओलीलाई शेर बहादुर नामको शत्रु चाहियो नै किन?
आइतबार, २६ फागुन २०७५ पिएसजे टिभी
कविता लेख्नेहरु भन्छन, ईतिहास क्रूर हुन्छ। राजनीतिका पेशेवर खेलाडीहरु भाषण ठोक्छन, "हामीले ईतिहासबाट सिक्नुपर्छ।" ईतिहासको लिस्नो टेकेर सत्ताको गद्दीमा नितम्ब थेचार्नेहरु पाखंड पराकाष्ठाका परिसूचक हुन्। समाजको ऐना साहित्यले देखाउंछ। देखाउनुपर्ने हो। जतिबेला राज्य आतंकमा उत्रिन्छ, जतिबेला आम जनता नीरिह हुन पुग्छ, जतिबेला पत्रकारितालाई कानूनको फांसो लगाएर सत्तासीनहरु आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न खोज्छ्न, जनताका आवाजका रुपमा साहित्य प्रकट हुन्छ। म्याक्सीम गोर्कीदेखि लियो तोल्स्तोय वा जर्ज अरवेल देखि एलेन गिन्सबर्ग उदाहरण छन्।
नेपालमा यस्ता साहित्य लेखिनेबेला सकिए। देवकोटा, रिमाल र शेरचनहरु ईतिहास भैसके। अहिलेको पुस्तामा त्यो आगोको फिलिंगो बाँकी छैन। राजनीति संगसंगै साहित्य समेत स्खलित भएको छ। यतिबेला "जुकरबर्ग क्याफे" र "कफी गफ"को बजार फस्टाएको छ। पत्रकारिता नेताहरुको कुहिएको सागलाई गुन्द्रुक बनाउन सुकाउने आँगन तुल्य छ।
तर ईतिहासको यात्रा रोकिएको पो कहाँ छ र? बीपी कोईरालाको कुनैबेलाको राजनीतिक वर्तमान मेरो पुस्ताको लागि ईतिहास भयो। तर उनै विशेश्वरप्रसाद कोईरालाका साहित्यिक कृतिहरुमाथि शोधार्थीहरुले बिद्द्यावारिधि गर्ने क्रम जारी छ। राजनीतिक रुपले, बीपी नेपाली कालखण्डका एक युग भएर गए। या बीपी भन्दा पहिलेको राजनीति अथवा बीपी पछिको राजनीति। उनले एउटा कालाखण्डको परिभाषा दिएर गए। साहित्यमा उनै कोईराला अझै बग्दैछन् ,अविरल। यो हो ईतिहास। त्यसै होईंदैन युगपुरुष।
तर, मेरो आजको 'मोनोलग' साहित्यका बारेमा होईन। निबन्ध लेख्दैछु। मलाई लेख्ने छुट छ। मैले कुनै सूत्रलाई उल्लेख गरेर समाचार लेखे जस्तो बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। साहित्यप्रति सम्मान छ, तर म साहित्यकार होईन। मलाई एउटा राम्रो कविता भन्दा खलबली मच्चाउने समाचारप्रति आशक्ति छ। तर एउटा राम्रो कवितामाथि म समाचार बनाउन सक्छु। म गाली बैइज्जतिको मुद्दा नलाग्ने ढंगले कसैका बारेमा पनि समाचार बनाउन स्वतन्त्र छु। कुनै पनि घटनाको विश्लेषण गर्न सक्षम छु। पात्र र घटनाको मिसावट त मेरा लागि लेखनको खानी हो।
आजका मेरा पात्र हुन्, कसैले रुचाएका अनि कसैले घिनाएका नेपाली राजनीतिको शीर्ष स्थानमा कीलो गडेर बसेका कमरेड केपी ओली। विरोधीका लागि कहिले उनी 'उखाने' हुन्छन, कहिले 'गुखाने।' तर उनलाई यसले फरक पर्दैन। आफूलाई बडा तिलस्मी देखाउंछन्। नेपालमा हुँदा कुनैबेला म एउटा अंग्रेजी अखबारका लागि काम गर्थें। भीमसेनगोला बानेश्वर तिर एउटा पहेंलो घरमा डेरा लिएर बसेका थिए उनी। बडो प्रेमले चिनियाँ हरियो चियाले स्वागत गरे। म अंग्रेजी अखबारको प्रतिनिधि भन्ने बुझेपछि झन्डै दुई घण्टा उनले नेपालीको एक शब्द बोलेनन्। मलाई मन पर्यो। कमसेकम कांग्रेसी रामशरण महत र महेश आचार्यपछि एउटा कम्युनिष्ट नेता त विदेशीसंग कुरा गर्न सक्ने निक्लियो। मैले मेरो फोटोग्राफर साथीलाई भनें। उसले सहमतिमा मुन्टो हल्लाउंदै भन्यो, "हो यार, मान्छे ईण्टरेश्टिङ्ग रहेछ यो।"
तर सत्ताको साँचो हातमा लिएर आफुले उडाएको "बोईङ्ग" लाई निश्चित गतिमा निर्धारित गन्तब्यसम्म पुर्याउन "ईण्टरेश्टिङ्ग" मात्र भएर नपुग्दो रहेछ। फेरि ईतिहासकै कुरा। राणा शासनको अन्त्य र दरवारको अनेकौं षडयन्त्रपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोईरालाले पनि "बोईङ्ग" नभएपनि त्यतिबेलाको "डकोटा"को साँचो त पाएकै हुन्। तर आफूले पत्याएका तुलसी गिरि र विश्वबन्धु थापा जस्ता "को पाईलट"ले धोका दिएपछि उनको जहाज १७ सालमा "क्र्यास" भयो।
केपी ओली पनि अहिले आफ्नो "बोईङ्ग" प्रचण्ड नामधारी को पाइलटको भरमा उडाउँदैछन्। सैद्दान्तिक रुपले ओली बीपी भन्दा बढी "शक्तिशाली" पनि छन्। बीपीले राजा र भारतको स्वार्थलाई सन्तुलनमा राखेर जहाज ऊडाउनुपर्ने बाध्यता थियो। ओलीका लागि राजाको चुनौति छैन। तर चुनौति कम पनि छैन। केवल दुई तिहाई मात्रै छ।
प्रचण्डको काईते सत्ता समीकरणका कारण ओली अद्द्यक्ष भएपनि आफनै दलको अल्पमतको नेताका रुपमा खुम्चिएका छन्। पार्टीले उनले चाहे बमोजिम निर्णय लिन सक्दैन। उनले दोश्रोपटक जिताएकी राष्ट्रपति बिद्द्या भण्डारी नयाँ महारानीको अवतारमा प्रकट भएको कारण अलोकप्रीयताको भासमा परेकी छिन। जनताले उनको सुरक्षाको लागि रोकिएको बाटोको तगारो भत्काउन थालिसके। सत्ताको बचाउमा लाग्ने अपेक्षा गरिएका अरिङ्गालहरुको चिल्ने क्षमतामा प्रश्न खडा हुँदैछ। प्रचण्ड मूक दर्शक छन्। उनले सरकारको बचाउमा केही बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्।
अचानक, प्रचण्डका ईमान्दार सिपाही गृहमन्त्री रामबहादुर थापा कुनैबेलाका आफ्नै सहयात्री विप्लवी नेत्रबहादुर चन्दलाई लखेट्न थालेका छन्। सुरक्षा निकायले बिप्लवका बारेमा तीन महिना अघि दिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको कुनै दराजमा हराएको छ। बम बिष्फोटका घटनामा तीब्रता आएको छ। प्रचण्ड चूप छन।
ओली भारतीय प्रायोजनमा मंचित स्वतन्त्र मधेशका नेता सिके राउतसंग मंच साट्न विवश छन्। राम बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा जनमत संग्रहको विवादास्पद बुँदा हुलिएको छ। सिके राउतका कार्यकर्ताहरु "मधेश, एशियाको नयाँ देश" भन्ने तुल टाँगेर बिजयोत्सव मनाउँदै छन्। अरिङ्गालहरु कुनै कारणले गूंडमै छन्। ओली लाचार छन्। प्रचण्ड चूपचाप छन्।
लेखनको आरम्भमा साहित्यको कुरा त्यसै उठाईएको होईन। ओली साहित्यकार पनि हुन्। गएको भानु जयन्तीमा केवलकार चढेर, चन्द्रागिरिको डांड़ोमा पुगेर, कविता लेखेर उनले आफ़ूमा छचल्किएको काब्यरसको प्रमाण दिइसकेका छन्।
शेरबहादुर देउवा नामका प्रतिपक्षी नेता शीथिल छन्। आफ्नो जनै बिर्सिएर उनी म्याग्दीको तातोपानीमा डुबुल्की लगाउन ब्यस्त छन्। शेर बहादुरको बहादुरीबाट ओलीलाई कुनै खतरा छैन भने त्यो स्वाभाविक हो। तर प्रचण्ड जस्ता सहचालक हुन्जेल ओलीलाई शेर बहादुर नामको शत्रु चाहियो नै किन?
अब कविता तिर ध्यान दिनुस कामरेड ओली। दुई तिहाईको दिन लामो छैन।